Njehie nke kaadị Investors. Error 3 - Blockchain News
Njehie nke kaadị Investors. Error 3
Ntakịrị nke nchebe
Investing na cryptocurrencies jikọtara elu ize ndụ, tinyere dị ka a N'ihi nke ọnụnọ na ahịa nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke scammers na-eji ụzọ dịgasị iche iche nke ọgụ nweta kaadị-ego maka investors. Ya mere, dị ka ude nke cryptotrader Peter McCormack, ọgụ na kaadị Wallets na-kwara kwa ụbọchị. The mgbanwe nwekwara isiokwu mgbe nile-achọpụtazi na ike.
Onye ọ bụla njide nke a cryptocurrency ga-maara nke nwere egwu na-edebe ihe niile anya mgbe na-arụ ọrụ cryptocurrencies:
– Họrọ usoro nke na-akpakọba cryptocurrency: ọ kacha mma iji oyi wallets na ha kwadoo;
– Jiri abụọ-akpata Nyocha nke onye ọrụ
– Wụnye a pụrụ ịdabere na-emegide nje usoro
– Mgbe igosipụta gị onwe igodo
– Always ịlele adreesị nke wallets na njikọ
– Nwere a pụrụ ịdabere na usoro nke okwuntughe na-anọdụ ala-nkebi ahịrịokwu
Ọ bụkwa uru na-edebe gị okwuntughe na sid-nkebi ahịrịokwu a ebe di mma, ma ọ bụ eleghị ikwugharị akara aka nke Mark Frauenfelder, onye na 2017 fọrọ nke nta ka furu efu ya bitcoins n'ihi na ihe karịrị $ 32,000. Na niile n'ihi na o furu efu a mpempe akwụkwọ na a paswọọdụ nke 24 okwu si a oyi wallet. N'ịmata na ike icheta na PIN-koodu na wallet, ọ Amagh ghọtara na ọ nwere ike ghara inwe ya cryptocurrencies n'ụzọ ọ bụla.
Frauenfelder rịọrọ ndị oru nkwado nke kaadị wallet onye, dere na forums, chọọ ụzọ mbanye ya na ọbụna chigharịkwuuru a hypnosis ọkachamara, ma ihe niile a emeghị ka chọrọ N'ihi.
N'ihi ya, e nyeere ya aka site na a na-eto eto hacker, onye dere ihe ntụziaka na otú ịgbawa software a oyi wallet. Otú ọ dị, ọ na-eri ya ọtụtụ ọnwa nke nchegbu, ego na ọrụ na hacker maka agbake paswọọdụ na sid-okwu.
Njehie nke kaadị Investors. Error 2 Njehie nke kaadị Investors. Error 4
Korea bụ isi na kaadị ...
Previous Post:Njehie nke kaadị Investors. Error 2
Next Post:Ethereum Foundation mara ọkwa na nnata nke “mbụ ife nke enyem” nke $ 2.5 nde